နံရံဆေးခြယ်အနုပညာ သို့မဟုတ် Graffiti Art | အိုးဘို
Posted: May 22, 2009 in Review	Tags: Graffiti, StreetArt	2
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂီတအဖွဲ့အတော်များများဟာ လူငယ်များဖြစ်တဲ့အတိုင်း လူငယ်ထုရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးတွေကို Active Painting အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ abstract, expressionism ပန်းချီရေးဟန်တွေရဲ့အောက်မှာ ပုံစံပြောင်း၊ ချုံ့ယူပြီး သရုပ်ဖော်ခွင့်ရတဲ့အတွက် Graffiti Art ဟာ မြန်မာလူငယ်ထုရဲ့ အနုပညာနှလုံးသားအတွင်း
ကိန်းဝပ်နေခဲ့ပါပြီ။ အခုအခါ Live Show စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတချို့ရဲ့ background တွေမှာ Graffiti Art နဲ့ stage design ပြင်ဆင်မွမ်းမံလာတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ Lee Quinones ဟာ သူ့ရဲ့ အနီးဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်မှာ ခြယ်မှုန်းရေးဆွဲနေခဲ့ရာက ဘရွတ်ကလင်းတံတား (Brooklym Bridge) အနီးတ၀ိုက်မှာလည်း စိတ်တိုင်းကျ ခြယ်မှုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Baseball ကစားကွင်းရဲ့နံရံတွေမှာလည်း ညစဉ် မအိပ်မနေရေးဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ Graffiti Art ကို ၀ါသနာထုံသူ Fab5Freddy ကလည်း Village Voice သတင်းစာမှာ ‘အသွင်ပြောင်းရေးဆွဲမှု အနုပညာ’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ Graffiti Art အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အားထုတ်မှုကို သိရှိသွားတဲ့ ရောမမြို့ Medusa ပြတိုက်ပိုင်ရှင် Claudio Brunt ဟာ Lee နဲက Fred တို့ရဲ့ လက်ရာတွေကို သူ့ရဲ့ ပြခန်းမှာ ပထမဆုံး ပြသစေခဲ့တယ်။
အဲဒီလို အနုပညာတစ်ရပ်အသွင် ချီးမြှင့်ပြသလိုက်တဲ့အတွက် ဒီ Graffiti Art ဟာ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ပိုမိုထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ Graffiti ဟာ နံရံဆေးရေးပန်းချီ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာလွတ် ရှားပါးလာခြင်း အခက်အခဲတွေကြောင့် ရှေးရိုး ရေးစဉ်ရေးနည်းကနေ အနည်းငယ်သွေဖည်ပြီး ငွေကြေးပိုမို ဖြုန်းတီးရတဲ့ အနုပညာအသွင် ဖန်တီးရဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ အမှတ်တံဆိပ်စာလုံးတွေကို ပိုမိုပေါ်လွင်အောင် outline ခပ်ထူထူနဲ့ ဆေးများများသုံးပြီး ဆန်းသစ်ခြယ်မှုန်းခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ Graffiti ပုံစံသစ်ကို ‘Piece’ လို့ ကင်ပွန်းတပ်ကြပြန်ပါတယ်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ အကောင်းဆုံး Garaffiti Art ခြယ်မှုန်းနိူင်သူကို The New York Times သတင်းစာကနေ လျှောက်လွှာခေါ်ယူ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ ရလာဒ်ကတော့ စိတ်ကူးဆန်းပြားတဲ့ Graffiti အနုပညာရှင်တွေ များပြားစွာ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းပါပဲ။ Graffiti Art ဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျံ့နှံ့လာပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာတော့ ရထားတစ်စင်းလုံးကို ဆေးခြယ်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ Caine 1 နဲ့ Fabulous Five အဖွဲ့တို့ဟာ နာမည်ကျော် နံရံဆေးမှုန်းပညာရှင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။
Graffiti Art ကို ရူးသွပ်လာခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ဖန်တီးခြယ်မှုန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားရင်းနဲ့ အမည်စာလုံးများ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပူးကပ်ခြယ်မှုန်းရာမှာ Fullstop (.) နဲ့ Comma(,) တွေ ပါဝင်လာမှုကြောင့် အခက်အခဲ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံကြရပြန်ပါတယ်။
ဖန်တီးရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Phase2ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေမှာ (.) နဲ့ (,) တွေအစား arrow ကဲ့သို့ ဂရပ်ဖစ်ပုံသဏ္ဍာန်များနဲ့ ထည့်သွင်းခြယ်မှုန်းခြင်းအားဖြင့် စာလုံးတွေ ရှည်လျားအောင်ရေးဖို့ မလိုတော့ဘဲ အလွယ်တကူ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပြီး အဲဒီနည်းလမ်းအသစ်ကိုတော့ Wild Style လို့ အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။ Graffiti Art ကို Style အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးခြယ်မှုန်းရာမှာ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ခေတ်ဦးလူငယ်တွေကတော Hondo, Dead Leg နဲ့ Phase2တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုး ပန်းချီကား စုဆောင်း၊ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဟာ New York ကိုရောက်ရှိလာပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ Graffiti Art ဆေးခြယ်မှုန်းသူ လူငယ်များကို ရှာဖွေစုစည်းခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Graffiti Art ဆိုတဲ့ လူငယ်ထုအတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ကို ပြည်သူလူထုအတွင်း အရှိန်အဟုန်ကြီးစွာ ပျံ့နှံ့စေဖို့ပါပဲ။ ဥရောပ ဈေးကွက်အတွင်း ခင်းကျင်းချပြမယ်လို့လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
Fashion Moda, The Mudd Club, The New Wave Show နဲ့ The Sun Gallery တို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခြယ်မှုန်းပြသခဲ့တဲ့ Graffiti ဖန်တီးရှင်များကတော့ Dondi, Crash, Ramellzee, Zephyr, Futura 2000, Quik, Lady Pink, Seen, Blade နဲ့ Bil Blast တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူငယ်လေးတွေကို စုစည်းပြီး Museum Boymans Van Beuningen မှာ Graffiti Art လက်ရာသက်သက်ပြပွဲ ကျင်းပခဲ့ရာမှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တယ်။
“Graffiti Art” ဟာ ပန်းချီမဟုတ်ပါဘူး၊ အရူးအနှမ်းလူငယ်လေးတွေရဲ့ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ လက်ရာတွေပဲဗျာ” လို့ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုဖူးတဲ့ ပန်းချီဝေဖန်ရေးသမားတွေဟာ အဲဒီပြပွဲကို ကြည့်ရှုအပြီးမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်တွေ ဟောင်းလောင်းပွင့်ကျသွားတဲ့အထိ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ ပန်းချီကား ၀ယ်ယူစုဆောင်းသူတွေဆီကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ အံ့ဘနန်းညံစီလာပါတယ်။ Graffiti Art ဟာ ခုဆိုရင် ပန်းချီကားလောကမှာ နံရံ ဆေးခြယ်အနုပညာအဖြစ် နေရာတစ်နေရာခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိခဲ့ပါပြီ။
နေရာရလာတာနဲ့အမျှ Graffiti Art ပညာရှင်များဟာလည်း အုပ်စုနှစ်စု ကွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမအုပ်စုကတော့ အနုပညာစစ်စစ်ကို နည်းပညာပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တီထွင်ရေးခြယ် ဖန်တီးလိုသူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ Artwork တွေကို ဈေးကွက်ရှာ ရောင်းချနိုင်ဖို့ အခါအခွင့်မျှော်ကိုးနေကြသူများဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ဈေးကွက်ဝင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူပညာရှင်များအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ လက်မထောင် ၀င့်ကြွားလိုသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လေတံခွန် says:	July 25, 2009 at 10:20 am	ကျွန်တော်လဲဒီ graffiti art အကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပါပြီ…..
phyophyo says:	January 15, 2011 at 3:53 am	Thanks so much. God bless you all
Myanmar Hiphop Party at Singapore	(OBO Street Section)လူမိုက်ဘ၀ – Zero (၁၉၉၇)	Createafree website or blog at WordPress.com.	%d bloggers like this: